खुस्किन सक्छ !!
पदम भट्टराई, (काठमाडौं, नेपाल)
राष्ट्रिय सम्पत्ति र सँरचना ध्व्स्त पार्दा पार्दै,
कुनै बेला कतै बाट उछिट्टिएछ गणतन्त्र,
गण-गण भित्र फसेको छ गणतन्त्र,
गरिवी माथि कुल्चेर,
तन्कीइ रहेछ रबर जस्तै
कुनै बेला कतै आँफै चुडिन सक्छ।
सधैं सत्तालाई मात्र प्रहार गर्दा,
कुनै बेला कतै आँफै पड्कन सक्छ
के भरोशा छ र?
कुनै बेला कतै आफै खाडलमा पर्न सक्छ।
शहीदहरुको नाम बेचेर हिड्दै जाँदा,
कुनै बेला कतै आँफै बेचिन सक्छ।
बल र बन्दुकमा मात्रै चढेर हिड्दा,
कुनै बेला कतै आफै गुल्टिन सक्छ।
आफन्त र नातागोताको मात्रै हेरचाह गर्दा,
कुनै बेला कतै आफै एक्लिन सक्छ।
लालसा र मोहमा रन्थनिएर,
अनि पद र पैशामा गुम्सिदै जाँदा,
कुनै बेला कतै आफै खुस्किन सक्छ।
हो, साच्चै खुस्किन सक्छ।
we do like to see Kabiko photo.relly nice poam
साचै मन्छुने कबिता छ ,देशको समस्या बुजेर लेखियको छ ।
Ram sharan Pandey
Ramro,samea sapachik kabita ho yo.